‎Doh Athan - Our Voice on Apple Podcasts
Frontier Myanmar ကနေ အသစ်တင်ဆက်ပေးမယ့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ “ဒို့အသံ” အစီစဉ်ကနေ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
Frontier Myanmar ကတင်ဆက်ပေးမယ့် ပြည်တွင်းရဲ့ ပထမဆုံးတင်ဆက်တဲ့ အွန်လိုင်းအသံလွှင့် အစီစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ဒီအစီစဉ်ကနေ လှပတဲ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လူ့အခွင့်ရေးအကြောင်းအရာတွေကို သိသာထင်ရှားအောင် တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကနေ ထဲထဲဝင်ဝင်တင်ပြထားတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မေးမြန်းထားတဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေကတဆင့် အလွယ်တကူမကြားနိုင်တဲ့ ဘက်မျှတဲ့ နိုင်ငံတွင်းက ပြည်သူ့အသံတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားတင်ပြပေးသွားမှာပါ။
ဒီအစီအစဉ်ကို Frontier Myanmarရဲ့ website နဲ့ Facebookစာမျက်နှာပေါ်မှာ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တိုင်း ၀င်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့နဲ့ အတူတူရှိနေဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
Welcome to Doh Athan (Our Voice), an exciting new podcast from Frontier Myanmar. This online audio programme, the first of its kind in Myanmar, will help shineaspotlight on human rights issues that affect people across this beautiful country. We will leave no stone unturned in our attempts to bring unheard and moderate voices into the national dialogue through in-depth reporting and far-reaching interviews.
Doh Athan - Our Voic‪e‬ Doh Athan - Our Voice
Podcast:အကွမျးဖကျနှိမျနငျးမှုတှရှေိနတေဲ့မွဈကွီးနားဆန်ဒပွပှဲမြား။Doh Athan Ep -168
ဒီတဈပတျမှာတော့ မွဈကွီးနားမှာ ဆန်ဒထုတျဖျောသူတှကေိုအကွမျးဖကျဖွိုခှဲတာတှမြေားလာတယျလို့ ကွားသိရ ပါတယျ။ ဒီအကွောငျးတှကေို ထုတျဖျောတငျပွဖို့ မီဒီယာအငျအားလညျးနညျးနတောကွောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဟာဥပဒေ ကိုခြိုးဖောကျပွီး အကွမျးဖကျဖွိုခှဲနတေယျလို့ ဒသေခံတှကေ ဆိုပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးအပွညျ့အစုံကိုနားဆငျနိုငျပါပွီ။ (Unicode)
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မြစ်ကြီးနားမှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတာတွေများလာတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို ထုတ်ဖော်တင်ပြဖို့ မီဒီယာအင်အားလည်းနည်းနေတာကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဥပဒေ ကိုချိုးဖောက်ပြီး အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကိုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။(Zawgyi)
ဒီတဈပတျမှာတော့ တပျကအာဏာသိမျးအပွီး မွနျမာနိုငျငံရဲ့လူ့အခှငျ့အရေးအခွအေနတှေကေို ဒို့အသံက ဆကျလကျတူးဆှဖျောထုတျထားပါတယျ။အာဏာသိမျးပွီးနောကျ ညဉျ့နကျသနျးခေါငျလူဖမျးပှဲတှနေဲ့ တပျအာဏာပိုရလာအောငျဥပဒတှေပွေငျဆငျလာတာတှလေညျးရှိနပေါတယျ။ဒီဆောငျးပါးမှာတော့ အဖမျးဆီးခံရသူရဲ့မိသားစုဝငျတှဘေယျလိုကွုံနရေလဲ အပါအဝငျ ဥပဒပေညာရှငျတှကေ ဥပဒလေမျးကွောငျးအရ အကွံပွုခကျြတှကေိုလညျး နားထောငျရမှာပါ။ (Unicode)
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ တပ်ကအာဏာသိမ်းအပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကို ဒို့အသံက ဆက်လက်တူးဆွဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ညဥ့်နက်သန်းခေါင်လူဖမ်းပွဲတွေနဲ့ တပ်အာဏာပိုရလာအောင်ဥပဒေတွေပြင်ဆင်လာတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အဖမ်းဆီးခံရသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေဘယ်လိုကြုံနေရလဲ အပါအဝင် ဥပဒေပညာရှင်တွေက ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ အကြံပြုချက်တွေကိုလည်း နားထောင်ရမှာပါ။(Zawgyi)
ဒီတဈပတျမှာတော့ မွနျမာနိုငျငံမှ အငျတာနကျဖွတျတောကျခံရတာ၊သတငျးတုတှပွေနျ့နှံ့လာတာနဲ့အတူ မမှနျသတငျးတှပွေနျ့တဲ့နှုနျးဟာမွငျ့တကျလာနပေါတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ အှနျလိုငျးကနသေငျဖတျနတေဲ့ သတငျး ဟာမှနျရဲ့လားဆိုတာ သခြောစဉျးစားဖို့လိုအပျနပေါပွီ။ ဒါကွောငျ့ ဒို့အသံက သတငျးအခကျြအလကျကြှမျးကငျြ သူတှနေဲ့ ရနျကုနျလမျးမတှထေကျကလူတှကေို သူတို့သတငျးတှဘေယျနရောကနေ ဘယျလိုရယူကွလဲ။ အဲ့ဒါ တှမှေနျမမှနျဘယျလိုအတညျပွုကွလဲဆိုတာကို မေးမွနျးကွညျ့ခဲ့ပါတယျ။ဒီဆောငျးပါးအပွညျ့အစုံကို နားဆငျနိုငျပါပွီ။(Unicode)
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရတာ၊သတင်းတုတွေပြန့်နှံ့လာတာနဲ့အတူ မမှန်သတင်းတွေပြန့်တဲ့နှုန်းဟာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ အွန်လိုင်းကနေသင်ဖတ်နေတဲ့ သတင်း ဟာမှန်ရဲ့လားဆိုတာ သေချာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒို့အသံက သတင်းအချက်အလက်ကျွမ်းကျင် သူတွေနဲ့ ရန်ကုန်လမ်းမတွေထက်ကလူတွေကို သူတို့သတင်းတွေဘယ်နေရာကနေ ဘယ်လိုရယူကြလဲ။ အဲ့ဒါ တွေမှန်မမှန်ဘယ်လိုအတည်ပြုကြလဲဆိုတာကို မေးမြန်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကို နားဆင်နိုင်ပါပြီ။(Zawgyi)
တပျမတျောအာဏာသိမျးအပွီး သတငျးလှတျလပျခှငျ့ထိပါးခံရတော့မလား စိုးရိမျစိတျတှေ မွငျ့တကျလာနရေပါပွီ။ တပျမတျောက ဆငျဆာစနဈကိုပွနျအသကျသှငျးလမေလား။ သတငျးထောကျတခြို့ ခွိမျးခွောကျရိုကျနှကျခံရတာတှဖွေဈပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ သတငျးမီဒီယာတှဟော အတိတျကခတျေဆိုး၊စနဈဆိုးတုနျးကလိုဘဲ သူတို့ဘယျတော့ကွုံလာရတော့မလဲလို့ ကြီးလနျ့စာစား သတိထားနရေပါတယျ။ဒီဆောငျးပါးအပွညျ့အစုံကိုနားဆငျနိုငျပါပွီ။(Unicode)
တပ်မတော်အာဏာသိမ်းအပြီး သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ထိပါးခံရတော့မလား စိုးရိမ်စိတ်တွေ မြင့်တက်လာနေရပါပြီ။ တပ်မတော်က ဆင်ဆာစနစ်ကိုပြန်အသက်သွင်းလေမလား။ သတင်းထောက်တချို့ ခြိမ်းခြောက်ရိုက်နှက်ခံရတာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သတင်းမီဒီယာတွေဟာ အတိတ်ကခေတ်ဆိုး၊စနစ်ဆိုးတုန်းကလိုဘဲ သူတို့ဘယ်တော့ကြုံလာရတော့မလဲလို့ ကျီးလန့်စာစား သတိထားနေရပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကိုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။(Zawgyi)
မှနျပွညျနယျကြေးရှာတဈခုကရှာသားတှဟော သူတို့မွတှေကေို ကြောကျထုတျခငျြတဲ့ပုဂ်ဂလိကကုမ်ပဏီတဈခုဆီ မရောငျးခငျြတဲ့အတှကျ စိုးရိမျစိတျတှမြေားနကွေပါတယျ။ တခြို့က မွတှေမေရောငျးဖို့ အားထုတျခုခံနကွေပမေယျ့ ဒီကိစ်စကရှာကိုသှေးကှဲစခေဲ့ပါပွီ။ဒီဆောငျးပါးအပွညျ့အစုံကိုနားဆငျနိုငျပါပွီ။(Unicode)
မွန်ပြည်နယ်ကျေးရွာတစ်ခုကရွာသားတွေဟာ သူတို့မြေတွေကို ကျောက်ထုတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုဆီ မရောင်းချင်တဲ့အတွက် စိုးရိမ်စိတ်တွေများနေကြပါတယ်။ တချို့က မြေတွေမရောင်းဖို့ အားထုတ်ခုခံနေကြပေမယ့် ဒီကိစ္စကရွာကိုသွေးကွဲစေခဲ့ပါပြီ။ဒီဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကိုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။(Zawgyi)
ထိုငျးမှာအလုပျလုပျခငျြလို့ မြှျောလငျ့ခကျြတသီကွီးစောငျ့ဆိုငျးနတေဲ့ ထောငျနဲ့ခြီတဲ့မွနျမာရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားတှရေဲ့ အလုပျသှားလုပျရကိနျးက နှောငျ့နှေးနပေါတယျ။သူတို့ထဲကအမြားစုဟာ ပှဲစားတှနေဲ့အလုပျအကိုငျရှာဖှရေေးအဂေငျြစီတှကေို ပိုကျဆံဆယျသိနျးကြျောစီပေးထားခဲ့ရပွီဖွဈပါတယျ။ အခုပေးလိုကျရတဲ့ပမာဏဟာ အစိုးရ သတျမှတျထားတဲ့ဝနျဆောငျခတှထေကျ အဆမြားစှာပိုနပွေီး ခြေးငှားထားရတဲ့အတိုးတှကေလညျး ပေးရမယျ့ရကျ ထကျကြျောလှနျနပေါပွီ။ ဒီဆောငျးပါးအပွညျ့ အစုံကိုနားဆငျနိုငျပါပွီ။(Unicode)
ထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ချင်လို့ မျှော်လင့်ချက်တသီကြီးစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ အလုပ်သွားလုပ်ရကိန်းက နှောင့်နှေးနေပါတယ်။သူတို့ထဲကအများစုဟာ ပွဲစားတွေနဲ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကို ပိုက်ဆံဆယ်သိန်းကျော်စီပေးထားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုပေးလိုက်ရတဲ့ပမာဏဟာ အစိုးရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေထက် အဆများစွာပိုနေပြီး ချေးငှားထားရတဲ့အတိုးတွေကလည်း ပေးရမယ့်ရက် ထက်ကျော်လွန်နေပါပြီ။ ဒီဆောင်းပါးအပြည့် အစုံကိုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။(Zawgyi)